Akhri: Warbixin 6334 Qof Oo Toban Maalmood Gudahood Lagu Dilay Wadanka Boorma.
Wednesday September 06, 2017 - 15:59:31 in Wararka by
Ciidamada Melleteriga Boorma ayaa sare uqaaday Xasuuqa ay ku hayaan dadka Muslimiinta Rohinga ee laga tirada badan yahay.
Wararka ka imaanaya gobolka Araakaan ee muslimiintu ku badanyihiin ayaa sheegaya in xasuuq Jamaaci ah uu wali ka socdo gobolka islamarkaana ciidamada melleteriga iyo wadaado gaaleedyo mushrikiin ah ay nolosha ku gubayaan dad shacab sacbooley ah sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah.
Taliyaha ciidanka Melleteriga Boorma ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalkii 2-aad ee adduunka ay kujiraan isagoo ku goodiyay in muslimiinta uu ka saari doono Boorma, dowladda Boorma ee Buudiyiintu maamulaan waxay ku andacoonaysaa in xasuuqan ay uga hortagayso in islaamku uu wadanka qabsado.
Guddiga midowga Jamciyaatka Rohinga oo fadhigiisu yahay wadanka Banghaladesh ee dariska la ah Boorma ayaa sheegay in dadka lagu xasuuqay gobolka Araakaan uu ku dhow yahay 7-kun oo qofood wax ka yar toban maalmood gudahood.
Warbixinta ayaa lagu xaqiijiyay in lagasoo bilaabo 25,Augst 2017 illaa 5,September,2017 gobolka Araakaan lagu dilay 6334 qof oo haween iyo carruur ubadan halka dhaawacu uu gaaray 8349.
Ciidamada Melleteriga iyo Booliska ayaa kufsi jamaaci ah kula dhaqaaqay 500 hablo muslimaad ah, warbixinta ayaa lagu sheegay in dadka ku xanibay xuduudda ay wadaagaan Banghaladheesh iyo Boorma ay Boqol kun ka badanyihiin halka tuulooyinka ay ciidamadu gubeen ay gaarayaan 103 tuulo.
Waxa loogu yeero Q.Midoobe ayaa ku dhawaaqday in dhammaan hay'adaheeda gargaarka ay kalasoo baxday wadanka Baarma, waxaa xusid mudan in dowladaha caalamka islaamka kajira aysan waxba utarin dadka muslimiinta ah ee lagu gummaadayo wadanka Boorma ee dhaca Koonfur Bari Qaaradda Asia.